Shiinaha Midab buluug ah B113 / buluug buluug ah B102 / Ford buluug B118 / badweynta buluugga ah B105 iyo soosaarayaasha | Baizan
Buluug qafiif ah B113 / Buluug buluug ah B102 / Ford buluug B118 / Badweynta buluug B105
Muraayadda Jarida Muraayadda Nadiifinta iyo Goynta Filimka PVB
● Si sax ah u jarjar galaaska cabbirka saxda ah
● Hubi dusha muraayadda oo ka saar dufanka iyo ubaxyada, ku nadiifi galaaska biyaha tuubada.
The Ku biyo raaci koob biyo jilicsan / Jilicsan. Tayada biyaha ＜ 30μS, adkaanta biyaha P 10 PPM, heerkulku waa 40 ～ 60 ℃.
● Hawada qalaji muraayada oo ka fogow wasakheynta.
Filimka PVB waa in la gooyaa cabir ka weyn 2 ～ 5mm oo ka badan cabbirka dhalada.
● Qolka daweynta --- Heerkulka qolka laminationku waa inuu ahaadaa 20 ～ 25 ℃, huurka waa inuu ahaadaa 23% ± 2%, cadeynta uumiska, mashiinada nadiif ha ahaado, shaqaaluhu waa inay dhowraan labiska, koofiyada iyo geedaha Asheeraah si looga ilaaliyo filimka PVB inuu ubax noqdo, faddarayn iyo timo.
● Xaaladaha laydhka:
a) Heerkulka dusha muraayadda --- 20 ～ 30 ℃, kan ugu sarreeya waa inuusan ka badnaan 40 ℃.
b) Heerkulka filimka PVB --- 20 ～ 25 ℃.
c) Hubi mar kale filimka PVB muraayadduna way hagaagsan tahay oo cabirka quraaraddu si habboon buu u dhigmaa cabbirka filimka PVB.
Daalista Cadaadiska Ka Hor
Faakiyuum qabow iyo faakiyuum kulul
a) Vacuum qabow --- Shahaadada faakiyuumka fareemka waa inay ahaataa 580 ～ 680mmHg, heerkulka 20 ～ 25 ℃, cadaadiska -0.095 ～ -0.1MPa. Waxay ku qaadataa kudhowaad 20 daqiiqadood Bamgareyn Qaboojin Si Joogto ah, halka 30 daqiiqo oo bamgareyn ah oo aan Caadi Ahayn.
b) vacuum kulul --- Heerkulka dusha galaaska waa inuu ahaadaa 100 ～ 120 ℃, waxay qaadataa 30 ～ 45 daqiiqo, cadaadisku waa inuu ahaadaa -0.095 ～ -0.1MPa. Galaaska waa la soo bixi karaa marka heer kulku hoos u dhaco oo uu gaaro 60 ～ 80 ℃.
● Qiiqa Rolling:
a) Heerkulbeegga ugu horreeya - temperature Heerkulka dusha sare ee Dahaarka leh ee Dahaarka leh waa 30 ～ 40 ℃ - rol Duudiyaha ugu horreeya, cadaadisku waa 5 ～ 8Mpa, masaafada duubku waa inay ka hooseysaa 1-2mm dhumucda muraayadda Dahaarka ah - ther Heerkulka labaad - heerkulka dusha sare waa 65 ～ 80 ℃, cadaadisku waa 5 ～ 8Mpa, masaafada duubku waa 2-3mm wax ka yar dhumucda muraayadda.
b) Ku hay heerkulka heerkulbeegga shaqo joogto ah.
Samaynta Cadaadiska Sare
Heerkulka iyo cadaadiska kor u kaca waxay ku socdaan xawaare hoose inta lagu jiro howsha oo dhan. Nidaamka hoos ku xusan ee tixraaca:
Kordhi heerkulka iyo cadaadiska - → Heerkulka kor u kaca ilaa 60 ℃, Cadaadiska ilaa 0.4MPa— → Cadaadiska ilaa 0.8MPa, heerkulka ilaa 90 ℃ - → Cadaadiska ilaa 1.0MPa ,, Heerkulka ilaa 135-140 ℃ - → Kordhi heerkulka ilaa 1.05 ～ 1.28 MPa— → Heerkulka ha ilaaliyo 30 ～ 60 daqiiqo (waxay kuxirantahay dhumucda dhalada iyo tirada) - → Cadaadiska hayso, adoo si xur ah hoos ugu dhigaya heerkulka 90 ℃ - decrease Heerkulka hoos udhaca ilaa ～ 55 ℃, sii daa hawada
Xiga: N-UV PVB
Jaale Y101 / Jaale hufan Y102
Midab cad M104 / Caano cad M102 / Op ...